Youtube | OROMIASAMSUNG
Oduu Biroo ዜና
Youtube irraa Maallaqa argachuuf qabxiilee beekamuu qaban 15
abdulwasi oumer	 Jun 23, 2021 18
1. Youtube galii hangam tahu namaaf kafala? Namootni tokko tokko lakkoofsi SUBSCRIBE fi LIKE baay'achuun maallaqa akka argamsiisutti fudhatu. Garuu kuni dogongoraa dha. Subscribe fi Like baay'achuun bakka maallaqni itti argamu si geessa…
Youtube seera haaraya baasen Gibira 24% isinirraa sassaaba jedha
abdulwasi oumer	 Mar 11, 2021 6
Dhaabbanni Google hojjattoota Youtube irraa kan Ameerikaan ala jiranirraa TAX (Gibira) sassaabuf deema. Google dhaabbata Ameerikaa guddaa yemmuu ta'u tajaajiloota hedduu kenna. Tajaajila isaa keessa tokko Youtube dha. kana dura Google…
Namootni youtube irra hojjachaa jirtanii fi hojjachuu feetan hunduu qabxiilee kana baraa
abdulwasi oumer	 Aug 25, 2020 0
Yeroo ammaa kanatti youtuber ta’uun hojii oogummaa fi beekumsa barbaadudha. Sababni isaa seera youtube'n bara 2018 baasee booda namoonni baay’een channel youtube banuurraa duubatti deebi'aniiru. Karaa biroon immoo namoonni kalaqa…
Oduu addaa: Google Adsense Baankii western union waliin hojjachuu dhaabe
abdulwasi oumer	 Aug 14, 2020 0
Waggoota hedduuf maallaqa 'Google Adsense' keessaa baasuf karaan filatamaan Baankii 'western union' jedhamu ture. Garuu amma August 10, 2020 irraa eegalee sababaa dhibee koroonaatif walii galtee waan diiganiif Maallaqa Adsense keessaa…
Lakkoofsi IMEI maali? Bilbila bade argachuuf nu gargaaraa?
Tajaajila Ammayyaa Dhaabbatni ‘Dreamlaal’ Kennu 18
Technology Addunyaa sodaa keessa galche ‘Deepfake’
Faayila kamuu akka yoomuu hin bannetti ol kaayachuuf
Download & Link 17
Oduu Biroo ዜና 7
Oduu Technology 15
Website Design: abdulwasi.com